Waa Sidee xaalada dhabta ah ee Maxbuuska Hore u aha madaxawyanaha Degaanka Somaalida Ethiopia oo Ku Xidhan Jeelka Alambaqa ee Adisababa | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Waa Sidee xaalada dhabta ah ee Maxbuuska Hore u aha madaxawyanaha Degaanka...
Waa Sidee xaalada dhabta ah ee Maxbuuska Hore u aha madaxawyanaha Degaanka Somaalida Ethiopia oo Ku Xidhan Jeelka Alambaqa ee Adisababa
Warar laga helayo ehelada madaxweynihii hore ee Dowlad-deegaanka Soomaalida, Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa sheegaya in ay la kulmeen “ayadoo Cabdi lagu jirdilayo xabsiga uu ku xiran yahay”.
Xaaska, iyo hooyada dhashay Cabdi Maxamuud Cumar ayaa labaduba ka hadlay “inay arkeen” jirdilkaasi.
Xaaska Cabdi Maxamuud Cumar, Sadiiqa Cabdi Ismaaciil, ayaa sheegtay in iyagoo cuno u geeyey ay arkeen askar garaacaysa Cabdi Maxamuud, kana soo tuurtay jaranjarada dhimsaha halkii uu ku xirnaa.
“Qolkii uu deganaa ayaan ku aragnay labaatan nin oo bustayaashii uu ku jiifay intay u dhibeen ku yiri ka kac meesha, markaan weydiinay halka ay u wadaana waxay noo sheegeen inay qolka u baddalayaan. Ka dibna waxay ka tureen jaranjaradii guriga. Wey dileen burar ayayna la dhaceen” ayey tiri Sadiiqa.
Diib Mahad Colow oo ah Cabdi Maxamuud hooyadiis ayaa mar ay BBC u warramaysay tiri “way jiideen, wuuna miyir belay, meel wasaq ah ayayna ku tureen, warna kama hayo inuu dhintay iyo in kale, waanan isaga soo tagnay”.
Dawladda Itoobiya ayaa ku gacan sayray eedeyntaas. Taliyaha Booliska federaalka ee Itoobiya, Jeneraal Zeyinu Jemal wuxuu BBC u sheegay “inay been tahay. Ma jirto cid garaacday. Inkastoo lagu eedeeyey dambiyo culus, si wanaagsan oo ah sidii madaxweyne hore ayey ula dhaqmayaan ayuu yiri”.
Isagoo ka hadlayey in isbitaal loo ogolaaday iyo in kale ayuu yiri Jeneraal Zeyinu Jemal “Isbitaal marka la aadayo waa in bukaan socod eegtada xabsiga ku dhex taalla ay u dirto. Haddii uu xanuunkiisa weyn yahayna isbitaal ayaa loo dirayaa. Nidaamka ayaa sidaas ah, cid si gaar ah wax loogu samaynayo ma jirto” ayuu sii raaciyey.
Jimcaha soo socda ayaa loo ballansan yahay dhagaysiga labaad ee dacwadda ka dhanka ah Cabdi Maxamuud Cumar iyo dadka la xiran.
Ehelka Cabdi ayaa sheegay in loo diiday inay qaataan damaanad uu banaanka ku joogo inta dacwaddu ay socoto.
Maxkamaddii hore ee la saaray ayaa ogolaatay in 14 maalmood xabsiga lagu hayo inta la dhamaystirayo caddaymo ay dacwad oogayaashu maxkamadda hor keeni doonaan.
Taliyaha Booliska itoobiya, Zeyinu Jemal, ayaa hore u sheegay in Cabdi Maxamuud Cumar loo haysto rabshadihii magaaladda Jigjiga ka dhacay afartii bishii Agoosto, rabshadahaas oo dad badan ay ku dhinteen laguna gubay dhismaha kaniisad magaalada ku taalla iyo hanti kaleba.
Rabshadahaas ka sokow, dacwad oogayaashu waxay diyaarinayaan eedeymo kale oo dheeraad ah.
Shan xubnood oo maamulkii hore ka tirsanaa maamulka dawlad-deegaanka ayaa la xiran Cabdi Maxamuud Cumar, Mid ka mid ah xubnahaasina waa Raxmo Maxamuud Haybe oo muddo dheer ahayd Wasiirka Haweenka.
Dhamaan xubnahan ayaa loo haystaa sida horay loo sheegay kicinta dhalinyaro Jigjiga joogta oo gaystay “dhibaato, dil iyo khasaare kaleba leh”.
Baraha Bulshada ayaa waxaa ka socda olole xoogan oo iska soo horjeeda. Dadka qaar ayaa aaminsan in Cabdi Maxamuud Cumar uu mudan yahay in dacwadahan lagu qaado, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inay qalad tahay in Cabdi Maxamuud Cumar sidan loola dhaqmo.
Ra’yi kala duwanaanshaha dadweynaha ayaana keenay in si weyn loogu doodo baraha bulshada, walow maamulka Dowlad-deegaanka uusan weli ka hadlin dawcada ka dhanka ah Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha kale ee la xiran.
Cabdi Maxamuud Cumar oo Dowlad-deegaanka madaxweyne ka ahaa mudo tobon sano kudhow ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyey xadgudubyo xagga xuquuqul insaanka ah.
Warbixintii u dambaysay ee hay’adaha xuquuqul insaanka ay soo saareenna waxaa lagu sheegay in jeelka weyn ee Jeel Ogaadeen loo yaqaano laga gaystay dhib badan oo maxaabiista ku dhacay.
Ka dib waxaa xaaladda faragelin ku sameeyey mileteriga dowlada dhexe, waxaana la beddelay inta badan maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar la soo shaqeeyey.
Dowlad Deegaanka waxaa hadda sii haye Madaxweyne ka ah Mustafa Muxumed Cumar (Mustafe Cagjar) oo ka mid ahaa ragga sida weyn uga soo horjeeday xukuumaddii Cabdi Maxamuud Cumar.
Deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkan dambe waxaa laga helay shidaal, gaar ahaan deegaanka gobollada Shabeelle iyo Qorraxeey, shidaalkaasina waxuu deegaanka ka dhigay in loo hanqal taago.
Inkastoo aan weli heshiis cad laga gaarin sida khayraadkaasi loo wadaagayo hadana isbeddellada xagga maamulka ee guud ahaan Itoobiya ka dhacay ayaa keenay in deegaanka uu muhiimad gaar ah yeesho.
Waxaa sidoo kale heshiis nabadeed uu u socdaa ururka ONLF oo muddo dheer deegaanka dagaal ka waday iyo dowladda Itoobiya.
Balse waxaa wax walba la kala ogaan doonaa muddada sannadka iyo barka ah ee doorashada guud ee dalkaasi ka dhiman.
Previous articleJariidada Alleastafrica oo Daabacday Kaalinta uu ku laha madaxwaynaha dawlada xamar in wadhadal Loo Diyaariyo Labada madaxwayne ee Jabuuti iyo Eritaria
Next articleHantidayadii iyo aduunkayagaii khasab ayaa lagula wareegay, xubin ka mida shirkadihii maamulayay haamaha shidaalka berbera